Naphezu kweqiniso lokuthi for izitsha ezifana shaverma, Kukhona kwesilinganiso kuhle olubandlululayo kusenzima hhayi zinkulu. Kulula ukulungiselela ukudla, izingxenye zalo, okunama-kilojoule amancane, kodwa unempilo futhi ezihlwabusayo ngesikhathi esifanayo futhi engabizi, futhi inhlanganisela yabo yayingase ibizwe ngokuthi lesifanele. Umsuka shavermy awuqondakali kahle, kodwa nakanjani singasho ukuthi lokhu isidlo cuisine Oriental, nakakhulu, kokusungulwa abasuka eMpumalanga, njengoba uhlu imikhiqizo kungokuhluke European. Ngomqondo onabile, izitsha ezifanayo ne inhlanganisela inyama nemifino atholakala emakhishini lezizwe ahlukahlukene eMpumalanga, kodwa asikwenzi lokho. Kuye caloric sauce shavermy kungaluqinisa kakhulu ziyahlukahluka. Ngokuvamile cishe ubandlululo wakhe elihlobene ne ukungaqiniseki ukuthi umuntu zigeze izandla ngaphambi benza shawarma, futhi yini imikhiqizo asetshenziswa ke - ngamafuphi, yakudala ngoba isipiliyoni iIgama.
Kodwa isixazululo ezifana shaverma ekhaya, kube kuhle ukulondoloza ezimweni eziningi. Ngokwesibonelo, uma ngokungazelelwe kuhlelwe ephathini kunothile izivakashi, futhi leso sikhathi ukuze alungiselele ukudla okululana kuthiwa, okuyinto ayifuna ngabomvu entula - ikhaya shaverma lapha Uyokwamukelwa kakhulu. Ungenza ngisho ke wokulungiselela jikelele: Sika izithako kwanele uhlanganise nososo nge izinongo, futhi wonke umuntu uzokwazi ukuqoqa ke ngendlela esilindele yakho: kwenzeka ukuthi umuntu uyaqiniseka imifino ngubani iguliswa utamatisi, kuyilapho abanye ukugwema imayonnaise, kodwa ukuthi Ungadla ndlela ukujabulisa bonke abantu. Ngaphezu kwalokho, kuvumela nawe ukuze uzizamele izithako, ngisho ukudlala kancane.
Shaverma ekhaya kudinga imikhiqizo ethile: Pita ngokuvamile mncane Armenia, kodwa ezahlukeneyo zingenzeka Pita (ezibanzi flat roll) noma imiqulu ehlukahlukene. lavash Armenia - isixazululo enkulu kulabo obakhathalelayo sibalo sabo, ngoba kunciphisa inani ufulawa kule isidlo, ngaphandle, nalapho eyilungu kuphela lamanzi, ufulawa nosawoti ngaphandle kokwengeza noma imaphi amanoni.
Futhi kudingeka ezihlukahlukene imifino shavermy: ngokwesiko ke amahlumela, ungathatha ngesisa ukuze isaladi Chinese, kodwa ukunambitheka akufani. Kungaba okungcono iklabishi ekuseni: kwanele futhi ithenda, nokunambitheka kuyinto ngempela okukhulu. Ngezinye izikhathi shavermu ukubeka izaqathe, kodwa lokhu into ozikhethela wena. Kodwa anyanisi notamatisi kufanele kube khona nakanjani. Ukuze freshness ukunambitheka ukuze ungeze ikhukhamba fresh, futhi kwezinye izimo kungase kube okunosawoti noma zifakwe emanzini anosawoti - I-nokucija. Imfanelo Esisemqoka kwanoma iyiphi Oriental ukudla -Green ngokuzikhethela empumalanga, ungenza parsley bendabuko kanye dill. Zonke imifino kufanele lisikiwe njengoba thinly ngangokunokwenzeka.
Kodwa ngaphandle kwalokho abaningi shaverma engacabangeki - inyama. kufanele kube kanjani? Ngenxa yalokhu, kukhona izinguqulo eziningi, kuhlanganise eyaziwayo amahlaya, kodwa uma silungiselela shaverma ekhaya, khona-ke ukuthi ivelaphi kungaba ungaqiniseki. Ngokwesiko, le isidlo ithatha inkukhu eyosiwe ke zingathengwa esitolo, kodwa ungakwazi nje ubhake inkukhu kuhhavini noma gazinga - kuyoba kubi kakhulu, nje ikhalori elengeziwe - ke kuyodingeka wengeze uwoyela. Ngaphezu inkukhu ku shawarma zingabekwa ingulube, kodwa kudingeka alungiselele wona ukuze yayithambile. Futhi ulingana noma inyama yenkukhu kanye nanoma yimuphi inyama nhlobo, kodwa lezi zinhlobo kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ekuwulungiseleleni. Inyama kumelwe nakanjani babe izinongo samanje, ngalo kufanele iphekwe.
Izinongo cuisine empumalanga - Lena ingxoxo ehlukile. A umpheki onekhono nhlo awayo izinongo, kuhlanganise ukupheka, ukupheka kebab ku unembeza, futhi lezo zinto azisho ukwenzeka, nasekumeni, kaningi - okuningi kaningi kunakuqala abantu bacabangani. amakhosi ezinjalo azivamile ukuba unomphela zabo noma ngisho yebhizinisi, uma mina bangase basho kanjalo, amakhasimende. Ngesisekelo enjalo ezinuka kamnandi kuyinto turmeric, ngaphandle kwalokho kakho izindleko, akukho Eastern isidlo, curry, cardamom kanye nathi izinongo elaziwayo elincane ekhethekile asempumalanga. Ngomqondo onabile, shaverma ekhaya uyohlala kuze kube kanye nezinongo obalulekile kusuka ngomhla ka esitolo, futhi uma ukudayiswa kwalo ayitholakalanga - ungakwazi ukuthenga amaphakethe ambalwa namakha izitsha Oriental ezifana kebab, pilaf, nokunye, bese uzama ukwenza nabo noma inhlanganisela yabo .
nososo Traditional shavermy - isoso kanye imayonnaise, bangakwazi okwakumelwe zixutshwe bese ukuze bazibona sebebodwa noma izingqimba kungaba ukungezwa. Njengoba thina shaverma ekhaya, ungakwazi ukunakekela ikhwalithi calorific zabo ukubaluleka - imayonnaise ukukhanya, ngisho engekho uyokwenza Ukudla isidlo. Futhi, akekho oyekayo ukuze uzizamele nososo, isibonelo, engeza lwesinaphi noma ukuzama into entsha. Nososo kungenziwa exutshwe izinongo, futhi ungakwazi ukwengeza nje.
Shaverma akubalwa kufanele zihambisana ethize indlela ekhaya - ungakwenza indlela uthanda, inqobo nje okuqukethwe kwakubangelwa. Uma usebenzisa emgodini - ke zonke ngisho lula: vele uyenze ukuncishiselwa ngakolunye uhlangothi kanti ubeke ukugxusha ngaphakathi. Shaverma - isidlo esishisayo, ngakho udinga ukuba sikhathazeke, ukuthi ngokulinganayo lishise ku-microwave noma kuhhavini.
Ikhekhe "Boy Curly": iresiphi